Abenzi be-Rfid Tags - China Rfid Tags Suppliers & Factory
Ingqondo ine-ABS engaphezu kwengu-20 ehlukene yokukhethwa kwamakhasimende, usayizi / ukuma kuhlukile ngokuya ngezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Uyakwamukela i-OEM design.
Ezinye izinhlelo ze-RFID zidinga ukuthola iyunithi ethile ezintweni zeqembu. I-UHF LED Inlay idizayini enhle yokufinyelela isisombululo sokuthola into, efanelekile kumalebula ahlukahlukene e-RFID ukuguqulwa.Ngedivayisi ye-RFID yendawo yonke, ifunda futhi ithole i-INLAY / tag ene-TID ethile, bese ikhipha ukude i-LED, ibone umbuzo osheshayo futhi uthole izinto eziqondiwe! Siza ukuthola indawo yento, ithuthukise kakhulu ukusebenza ngokusezingeni kanye nezinga lokuphatha! Inhlanganisela ephelele yokufunda kwe-UHF okude nokukhanya kwe-LED kususa amaphuzu obuhlungu bezimboni futhi kwenza uhlelo lweRFID lubaluleke kakhulu!
Umaki we-ConquerorMini UHF On-metal
Umnqobi we-serial mini UHF on-metal tag uvele ngezinto zensimbi njengamathuluzi, izinsimbi njll.
Umnqobi we-serial tag iyi-UHF TAG yezinga lezimboni, ifaka ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ileveli ye-IP67 engenamanzi, ukumelana kwensimbi nokunye okuvelele.
Akunandaba ukuthi kunamathiselwe entweni yensimbi noma kufakwe ngaphakathi, kungafundwa, kufundwe iqembu, noma kufakwe isitaki. Isicelo se-RFID singasetshenziswa kabanzi futhi sithuthukiswe ngendlela engapheli!
Umaka we-RFID Ubucwebe
Ingqondo inikezela ngamathegi amaningi akhethekile we-rfid afana ne-RFID laundry tag, ithegi ye-RFID jewelry, ithegi ye-RFID windshield, ithegi yesondo le-RFID, ithegi yengubo ye-RFID njll.
Umaki wokuhlanza we-RFID
Umaki wesivikelo somoya we-RFID
I-RFID i-wristband elahlwayo
esetshenziswa kabanzi ephaselaji lesikhumulo sezindiza, ukulandelwa kwamaphasela, ukukhonjwa kweziguli, ukuhlonza, ukuphathwa kwejele, ukuphathwa kokunakekelwa komama nezingane.
Ibhande lesandla sephepha le-RFID
Izibhedlela ezisetshenziswa kabanzi, Izindawo Zokulawula Ukufinyelela, Amakhonsathi, Izikhumulo Zezindiza njll.
Ibhande lesandla le-RFID Silicone
esetshenziswa kabanzi kumaCampuses, Amapaki Okuzijabulisa, Amabhasi, Izindawo Zokulawula Ukufinyelela, Amakhonsathi njll.
Ukuphathwa kwempahla ye-MT001 rfid
I-RFID anti tag tag nayo iwuhlobo lwe-electronic rfid tag, evame ukusetshenziselwa ukudlulisa nokwamukela idatha. Ubuso buzosebenzisa izinto ezingabamba amagagasi kagesi. Le nto futhi inezinzuzo ezithile: njengokukhanya kwesisindo, ingamelana nokushisa okuphezulu, ubufakazi obumanzi, ingamelana nokugqwala.